Happy Birthday kwandiri! | Martech Zone
Happy Birthday kwandiri!
Wednesday, April 19, 2006 Mugovera, October 20, 2018 Douglas Karr
ExactTarget inzvimbo yakanaka yekushandira!
Mangwanani ano shamwari dzangu dzekudya kwemasikati / vandinoshanda navo / vamwe-vakaroorana vandishamisa nepodhi yakashongedzwa zvakanaka. Pedzisa nezuva rekuzvarwa confetti (chenjera kuti urege kuwana chero mune yangu keyboard), Happy Birthday ribhoni, iyo Expresso muchina (!!!), Dr. Grip Gel Fine Point peni, Expo Dry Erase Marker ine magnetic bracket uye eraser pamucheto, AND a "Tide To Go" Stain Remover (sezvo ini nguva dzose ndichidzoka kubva masikati uye donhwe rimwe chete rechinhu pahembe rangu).
Iwe haugone kuve nebhavhadhe riri nani kupfuura iro! (Kusvikira ndasvika kumba uye vana vangu vachindipa keke rangu nekenduru yangu 'Pamusoro peGomo'!). Geez, ini handisati ndatove makumi mana!
Tags: bhavhdhedouglas karrchaizvohofisi